Soo dejisan CyberLink PowerDirector 18.0.2717 – Vessoft
WindowsMultimediaTifaftirayaasha warbaahintaCyberLink PowerDirector
Bogga rasmiga ah: CyberLink PowerDirector
CyberLink PowerDirector – softiweer loogu talagalay ka shaqeynta tayada sare ee faylasha fiidiyowga. Softiweerku wuxuu kuu oggolaanayaa inaad u beddelo qalabka fiidiyowga ah ee fiidiyowga fiidiyoowga ah fiidiyoowga dabaqadda sare ah. CyberLink PowerDirector wuxuu ka kooban yahay set badan oo ah astaamaha aasaasiga ah ee tifaftiraha, saameynta ku dhisan, cinwaanno firfircoon iyo aalado kale oo loogu talagalay sameynta fiidiyowga. Softiweerku wuxuu awoodaa inuu ka soo qaado fiidiyowga shaashadda kumbuyuutarka iyo ilaha dibedda, sida kamarad fiidiyow, DVD ama kamarad websaydh. CyberLink PowerDirector wuxuu awood u siinayaa inuu u badalo faylalka warbaahinta qaabab kala duwan si ay dib ugula soo baxaan aaladaha kala duwan ee dibada.
Qayb ka mid ah aasaaska iyo qalabyada xirfadeed
La shaqee qoraal hoosaadka
Deganaanshaha fiidiyaha iyo nadiifinta buuqa
U beddelaada walaxda qaabab aaladaha dibedda ah
Waa soo dejinta wixii dheeraad ah
Soo dejisan CyberLink PowerDirector
Faallo ku saabsan CyberLink PowerDirector
CyberLink PowerDirector Xirfadaha la xiriira